नयाँ वर्ष शुभ रहोस् - GBM
२०७८ बैशाख १, बुधबार ०१:१२ गते gautam buddha sandesh	0 Comments
एक वर्षअघि वि.सं. २०७७ सालको स्वागत गर्दै गर्दा देशभर लकडाउन थियो । अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रबाहेक सबै मानिस घरभित्र बन्धक बनेका थिए । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान, नाका तथा सबै क्षेत्रमा लकडाउन गरेको थियो । वर्षारम्भमै महामारी संकट देखिएकोमा त्यसको असरले आर्थिक क्षेत्र संकटग्रस्त त भयो भयो, सँगसँगै राजनीतिक संकट पनि उत्तिकै चुलियो । राजनीतिक अस्थिरता र दलहरुबीचको अन्तरकलहले संसद विघटन भयो, अदालतले पुनस्र्थापना गरिदियो, दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकतापछि बनेको नेकपालाई अदालतले अलग्याइ दियो । राजनीतिक अस्थिरता र दलहरुबीचको कलह अहिलेसम्म जारी छ । संघीय सरकार मात्र होइन, कतिपय प्रदेश सरकारहरु समेत संकटमा देखिएका छन् । लामो समयको लकडाउनले आर्थिक क्षेत्र उसैगरी अस्तव्यस्त बनेको छ । थलिएको पर्यटन क्षेत्र अझै तंग्रिन सकेको छैन । लकडाउनले विकास निर्माण प्रभावित बन्यो, विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेन ।
वि.सं. २०७७ मा व्यहोर्नुपरेका यस्ता संकटहरु नयाँ वर्ष वि.सं. २०७८ मा पनि उस्तै गरी दोहोरिने सम्भावना छ । राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानी यथावत छ । सरकार फाल्ने र ढाल्ने प्रयत्नहरु जारी छन्, पार्टीभित्र गुटबन्दी मौलाएको छ । लक्ष्यअनुरुप विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । संघीय सरकार जस्तै प्रदेश सरकारहरु समेत अस्थिर छन्, कुन बेला कुन प्रदेशमा सरकार ढल्ने हो, ठेगान छैन । कोरोना कहर पनि उस्तै छ । दैनिक रुपमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा हामी नयाँ वर्ष मनाउन गइरहेका छौँ । सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धि सुरक्षा मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ, त्यसलाई लागु गर्दैनौं, लापरवाही गर्छौं, अनि दोष सरकारलाई मात्र दिन्छौँ । नयाँ वर्षसँगै हामी नागरिक पनि जिम्मेबार बनौँं, परिवार, समाज र राजनीतिक दल र देशलाई नै जिम्मेबार बनाऔँ । अधिकार खोजौं, साथमा कर्तव्य पनि नभुलौँ । हाम्रो चाहना शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धि नै हो । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो लक्ष्यलाई सबै पक्षको जिम्मेवारीबोधबाट मात्र सम्भव हुन्छ । सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, राजनीतिक दलले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु हुँदैन । अबको एक वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि पुनः आम निर्वाचन हुनेछ । राजनीतिक दलले निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिवद्धताहरु बिर्सदै गएका छन् । स्थिर सरकार दिने उनीहरुको वाचा ३ वर्षमै तोडिएको छ । नयाँ वर्षमा सबै क्षेत्रमा देखिएका यस्ता विकृति, विसंगति, अराजकता र भ्रष्टाचार अन्त्य होस्, सुशासन, विकास र समृद्धि सरकारको मूलमन्त्र बनोस् । कोरोना महामारीबाट मुक्त हुन सकियोस्, समस्त हाम्रा शेयरधनी, पाठक, विज्ञापनदाता तथा शुभेच्छुक सबैमा शुभकामना ।
← विदेशको चक्कर छाडेर मःम बेच्दै चौधरी
मिनर्वाका विद्यार्थीद्वारा वृक्षरोपण →
२०७५ माघ ६, आईतवार ०२:५३ गते gautam buddha sandesh	0
२०७४ मंसिर ५, मंगलवार ०६:०० गते २०७४ मंसिर ५, मंगलवार ०६:०१ गते gautam buddha sandesh	0
२०७५ माघ २, बुधबार ०२:३५ गते gautam buddha sandesh	0